प्रतिबन्धको प्रस्ताव लैजाने गृहमन्त्री किन विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन चाहन्छन्? यस्तो छ भित्रि रहस्य – जलजला अनलाइन
चैत २५, काठमाडौँ । राज्य बिखण्डनको नारा दिने सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा अवतरण गराउने सूत्रधारसमूहका केही नेता यतिबेला नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको ‘नेकपा’ का केही नेताको नियमित सम्पर्कमा छन्।
यो खबर दीपक खरेलले नेपालखबरमा लेखेका छन् विप्लव समूहसँग भइरहेको अनौपचारिक कुराकानीका बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नियमित ब्रिफिङ भइरहेको छ।
एक हप्ता भयो, विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छैनन्, जवकि २८ फागुन यता दिनहुँजसो सो समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्दै आएका थिए। विप्वल समूहविरुद्धको प्रहरी कारवाही जसरी नजानिदो पाराले मत्थर भएको देखिँदैछ, खासमा त्यो त्यही अनौपचारिक कुराकानीको उपज हो। जानकारहरु यसै भन्छन्।
त्यसो भए के सरकारले विप्लव समूहसँग साँच्चिकै औपचारिक वार्ताको तयारी गरिरहेको हो?
‘यो बिषयमा त केही जानकारी भएन’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यस्तो केही भइरहेजस्तो त लाग्दैन, घटनाक्रम विकास भए म आफै खबर गरौँला।’
‘तर, तपाईंकै पहलमा वार्ताको तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि’ भन्ने जिज्ञाशा राख्दा उनको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो त छैन होला।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार, विप्लव केही दिनअघि सल्यानमा थिए। पार्टीकै अर्का प्रभावशाली नेता अनिल शर्मा ‘बिरही’ सिन्धुली र काभ्रे क्षेत्रमा देखिएका थिए। पार्टीको स्थायी समितिको बैठक समेत चैत्र दोस्रो साताको मध्यतिर प्रदेश–३ कै अज्ञातस्थलमा सम्पन्न भएको सूचना प्रहरीले पाएको छ।
‘सरकारले वार्ताको तयारी गर्दैछ भन्ने सूचना पाएका छौँ’ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने ‘राजनीतिक समस्या र आपराधिक गतिविधि दुबैलाई फरक ब्यवहार हुनुपर्छ।’ ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार माथिल्लो निकायले कुनै निर्देशन दिएकाे छैन्। प्रहरीले अघि बढाएका मुद्दा प्रक्रियामै छन्।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुको दावी के पनि छ भने, विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) को नेतृत्वमा अर्को समूह समेत सक्रिय छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा उनी वार्तााका लागि परिचालित भएको स्रोतहरुको दावी छ।
जारी रुकुम महोत्सवका क्रममा उनी शनिबार (२३ चैत्र) देखि उतै छन्। उनको साथमा सत्तारुढ नेकपाका नेता मणि थापा र रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष जीवन शर्मापनि उतै छन्। यस विषयमा जानकारीका लागि प्रभाकरसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले आफू ब्यस्त रहेको जानकारी दिए।
‘विप्लवसँग वार्ताको विषयमा केही अन्य मिडियाले पनि जिज्ञाशा राखेका थिए’ शर्माका सहयोगी श्रीकुमार कठायतले आईतबार नेपालखबरसँग भने, ‘यस विषयमा मैले उहाँ (नेता शर्मा) लाई जानकारी गराएँ। उहाँले यस विषयमा केही भएको छैन भन्नुभयो।’
आइतबार विहानमात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल भइरहेकाे बताए। गृहमन्त्री बादलले नै २८ फागुनमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ, भित्रभित्रै विप्लव समूहसँग वार्ता वा वार्ताको पहल भइरहेको छ।
विप्लव समूहसँग सम्बद्ध एक पत्रकारका अनुसार, सोही समूह र सरकारबीच वार्ताका लागि पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुन सक्रिय छन्। ती पत्रकारले नेपालखबरसँग भने, ‘केन्द्रीय नेताहरुको भनाई पत्याउने हो भने महासचिव विप्लवसमेत काठमाडौँमै छन्।’ वार्ताका लागि सो समूहले प्रहरीले पक्राउ गरेका सबै नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्तालाई प्रारम्भिक शर्त बनाएको जानकारी पनि उनले दिए।
यद्यपी, महासचिव विप्लव निकट हेमन्त प्रकाश ओलीमाथि सरकारले गम्भीर मुद्दा लगाएकाले वार्ता केही जटिल रहेको सो समूहका नेताहरुको भनाई छ। जानकारहरुका भनाईमा, सो समूहभित्रको विवाद र अन्तरसंघर्षले पनि वार्ताको रोडम्याप निर्माणमा कठिनाई भएको छ।
वार्ताका लागि अहिले सक्रिय रहेका भनिएका ओमप्रकाश पुन प्रकाण्ड निकटकै नेता मानिन्छन्। पोलिटब्युरोमा रहेका अधिकांश सदस्यहरुले वार्ता मार्फत् अघि बढ्न सके पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने धारणा राखेको स्रोतको कथन छ।
‘सरकार पछि हट्ने स्थितिमा देखिन्न, हाम्रो पार्टी पनि अहिल्यै सरकारसँग भिडेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छैन’ सो समूहका अर्का एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाई गराएर पार्टी जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’ उनका अनुसार, सरकारले लगाएको प्रतिवन्धले पार्टीलाई प्रचार–युद्धमा महत्वपूर्ण सफलता त मिलेको छ। तर सँगसँगै प्रमुख र निष्ठावान कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।
सरकारले फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ सहित सयौँ नेता कार्यकतालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
पक्राउ पर्नेमा पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज मोहन कार्की ‘जीवन्त’, केन्द्रीय सदस्यहरु बसन्त श्रेष्ठ र बन्धु चन्द छन्। यस्तै ब्युरो इन्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठ ‘पुष्कर’ सहित पार्टीको फौजी कारबाही परिचालन तहमा बसेका मुख्य नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले विप्लव समूह विरुद्ध ७७ वटै जिल्लामा कारबाही केन्द्रित गरेपछि त्यसअघि सम्म आक्रामक रहेको सो समूह रक्षात्मक बनेको छ। र, वातावरण बने वार्ताको पक्षमा देखिएको छ।
सरकारले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० माथि टेकेर कारबाही अघि बढाएपछि त्यसअघिसम्म अर्धभूमिगत रहेका विप्लव पनि पूर्ण भूमिगत भएका छन्।
उपत्यकामा एक साताभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स !
चैत २९, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ। ‘देशभरको जुनसकै यातायात कार्यालयबाट ट्रायल पास गरे पनि स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्छौं’, विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले भने– ‘राजस्व तिरेको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स लिन सकिन्छ।’ तर उनले काठमाडौं […]
यस्तो छ प्रदेश २ को पछिल्लो मत परिणाम, कुन पार्टी कहाँ अगाडि ? (सुचिसहित)
Posted on September 20, 2017 September 20, 2017 Author जलजला अनलाइन
असोज ४, काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहका प्रारम्भिक नतिजा आउने क्रम जारी छ । १३६ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको सबै नतिजा शनिबारसम्म गर्ने गरी भएको मतगणनामा भइरहेको छ । हालसम्म ८३ स्थानीय तहको प्रारम्भिक नतिजामा नेपाली कांग्रेसको सुरुआती अग्रता कायम रहे पनि अन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेसले सबैभन्दा बढी २५ स्थानका मेयर […]
चैत २७, काठमाडौँ । निर्णयहरू अपारदर्शी हुने गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपजस्तो देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले हामीले सिधै ‘अब्जेक्सन’ गर्न गाह्रो भयो, अध्यक्षले नै कुरा गर्नुपर्‍यो – माओवादी मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा अनौपचारिक हस्तक्षेप बढाउन थालेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो सचिव सरुवालगायत निर्णय एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि […]